Ifektri Ephathekayo - Abenzi baseChina Abaphathekayo, abahlinzeki
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P01
Isipikha se-bluetooth senzelwe ukuzilibazisa. Ungajabulela umculo noma ucingo lwamahhala ekamelweni, ekhishini noma ngenkathi ugeza. Incane futhi ihlangene, kulula ukuyiswa noma ikuphi.
Ixhasa ukudlala kwe-bluetooth nokudlalwa kwamakhadi we-TF, okutholakalela ifomethi enkulu ye-MP4 / WMA / WMV. Nge-bluetooth version 5.0 idlulisa ngokushelela futhi itholakale kumadivayisi we-bluetooth angama-99%.
Okuyingqayizivele ukuthi ijikelezisa umbuthano ukulungisa ivolumu. Kusha futhi kulula. Kuyinto enhle yokusetshenziswa komndeni.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P02
Isipikha se-bluetooth esiyindilinga sisekela ukudlala kwe-bluetooth nokudlalwa kwe-AUX, okutholakalela ifomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Uhlobo lwayo lweBluetooth 5.0 liletha ukudluliswa komsindo okuzinzile ngokwedlulele, okuphindwe kathathu ukudluliswa kwejubane okujwayelekile.
Inomsebenzi ohlakaniphile wokushaya ucingo mahhala, ungashayela ucingo ngenkathi usegcekeni, ekhishini, ekamelweni lokulala noma ngenkathi wenza imisebenzi yasendlini. Ngokwakhiwa kwebhethri, kungasebenza kuze kufike ku-6hrs.
Uma uyikhethela ibhizinisi lokwenyusa umkhiqizo, inendawo enkulu ebushelelezi ukukhombisa uphawu lwakho.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P03
Lesi sikhulumi se-bluetooth siyimodeli enhle yokuphakanyiswa kwelogo yakho. I-logo yakho ingakhonjiswa ngamalambu e-LED, futhi unokukhetha okungu-4 kombala, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okubomvu nokumhlophe. Njalo lapho ikhasimende lisebenzisa lesi sikhulumi se-bluetooth kuzokwenza ukuthi uphawu lwakho luboniswe.
Itholakalela ukudlala kwe-bluetooth nokudlalwa kwamakhadi we-TF, okutholakalela ifomethi ye-MP4 / WMA / WMV, futhi ne-Bluetooth version 5.0 iyahambisana namadivayisi we-bluetooth angama-99%.
Inomsebenzi ohlakaniphile wokushaya ucingo ngesandla, ikwenze utholakalele ukubizwa lapho izandla zakho zimatasa. Kuyinto enhle yokusebenzisa umndeni.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P04
Lesi sipikha esiyimodeli se-bluetooth senzelwe iqembu elinothando, ukucula nokudansa. Imboza ngempumelelo i-200㎡, efanelekayo kalula ekhaya langaphandle, iphathi, isitolo nezinye izigcawu. Kusetshenziswa i-bass diaphragm enkulu kanye nezipikha ezibanzi ezigcwele ububanzi lezi zombili zihlangana ukudala ama-bass anamandla e-3D futhi zijabulele amaza omsindo anothando nomsindo ozungeze i-HIFI umsindo ongazwakali we-cinematic. Idizayini ephathekayo eyenziwe ngabantu, kulula ukuyiphatha njengephathi yokuhamba ongakujabulela ukucula nokudansa. Amalambu wephathi amahle anombala alandela isigqi somculo.
Kungadlalwa i-bluetooth, kudlalwe i-U-disk, kudlalwe ikhadi le-TF, kudlalwe i-AUX nemakrofoni, kuhlangatshezwane nomculo wefomethi ye-MP4 / WMA / WMV.
Okuyingqayizivele ukuthi kutholakala ukushaja ngelanga, ngenkathi udlala esikweleni noma kwenye indawo ngaphandle ukuthi kungakhokhiswa ngokuzenzakalela ngokukhanya kwelanga oyohlala unamandla anele.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P05
Lesi sikhulumi semodeli se-bluetooth sakhiwe ngendlela elula futhi ehlanzekile, kepha sikulethela umsindo omkhulu we-subwoofer 3D HIFI. Abashayeli bayo be-4X, ama-woofers ama-2 nama-tweeters ama-2, ama-watts angama-26 ama-watts RMS audiophile amplifier, ama-2 passive bass radiator yilawo enza leli bhokisi liqhume isilo se-bluetooth. Kukunika amandla okujabulela ngokugcwele umculo, ukucula, ukudansa kanye ne-movie, ukufanisa isikhathi sakho sokuphumula noma isikhathi sephathi nabangani. Noma ungashaywa ngesandla mahhala, uzozwa ukuthi abangani bakho noma izihlobo ziseduze kwakho futhi babhekene ubuso nobuso bekhuluma nawe. Isipikha se-bluetooth esisebenzisekayo singakusiza ukuthi ukwazi ukujabulela isikhathi esijabulisayo.
Iyaphatheka ngebhethri le-8000mAh, usebenza isikhathi eside, ungawujabulela ngokugcwele umculo ekhaya, egcekeni noma uwuse ngaphandle lapho uwudinga khona. Futhi ingasetshenziswa njengebhange lamandla ophuthumayo lwefoni yakho, ithebhulethi, ikhompyutha namanye amadivayisi kagesi. Uma ungaphandle kwenye indawo, unesipikha se-bluetooth nawe, ngeke ukhathazeke uma udinga amandla kumadivayisi wakho kagesi.
Inobuchwepheshe be-5.0 ye-bluetooth, ukudlulisa ngokushesha nokuqina, kepha ukusetshenziswa kwamandla okuncane, kuhambelana cishe nawo wonke amadivayisi we-bluetooth. Isipikha se-bluetooth asihambisani nje kuphela nokudlala kwe-bluetooth, kodwa futhi nokudlala kwamakhadi we-TF nokudlala kwe-AUX, kukwenza ukwazi ukujabulela kakhulu. Yidivayisi ekahle kagesi yesikhathi esijabulisayo nempilo engcono.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P06
Lesi sipikha semodeli se-bluetooth senzelwe ikakhulukazi itiyetha lasekhaya elincane, ukwakheka kwe-slot yamakhadi eselula, umphumela womsindo we-hi-fi ojabulayo. Yamukela isakhiwo somgogodla wesitiriyo, ifakwe i-radiator ephansi, ikhiqiza umsindo we-HIFI stereo, okwenza ikhwalithi yomsindo ibe namandla futhi icace njenge-crystal. Jabulela ama-movie nezingoma embhedeni, egcekeni nasekuphumuleni kwehhovisi, jabulela ngokugcwele itiyetha elincane.
Ungazitholela ukudlala i-bluetooth nokudlala kwekhadi le-TF. Iyatholakala ngefomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Iyahambisana namadivayisi we-bluetooth angama-99%, futhi iletha ukuhanjiswa komsindo okuzinzile kakhulu.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P07
Lesi sikhulumi semodeli se-bluetooth singadlalwa nge-bluetooth, kudlalwe ikhadi le-TF ne-AUX. Nge-subwoofer 3D HIFI ezungezile ungajabulela i-movie, izingoma kanye nokushaya ucingo njengobuso nobuso. Ungayisebenzisa ekamelweni lokulala, egcekeni, ekhishini, endlini yangasese noma epikinikini.
Isebenzela umculo wefomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Ngesisombululo se-bluetooth 5.0, iyahambisana namadivayisi we-bluetooth angama-99%, futhi iletha ukudluliswa komsindo okuzinzile kakhulu.
Okuyingqayizivele kuthinta isikrini ngokwewashi / esiphikisanayo ngokwewashi ukulungisa ivolumu, kungaba okukhethekile futhi kumnandi.
Lesi sikhulumi semodeli se-bluetooth senzelwe ukwakheka okuyimfashini, umbala kanye nesibambo esihle esinohlaka. Ungajabulela umsindo ozungezile we-subwoofer 3D HIFI. Ama-bass acwebezelayo futhi ashukumisayo aletha ukukhiqizwa okuphezulu komsindo, ukuthokozela okubucayi nokuyiqiniso kwe-acoustic. Izipikha ze-stereo ezingama-360 ° nezigcwele zinganikeza umsindo wempilo yakho. Izipikha ze-Bluetooth zinezipikha ze-stereo ezizungeze i-3D stereo namaprosesa asezingeni eliphakeme edijithali ukujabulela umculo nganoma iyiphi ivolumu. Ngisho nevolumu ephelele, kubonakala sengathi kusebenza bukhoma. Uzoyithanda injabulo yomsindo ozungeze isikhulumi se-Bluetooth esingenantambo ekulethela yona, njengendawo yaseshashalazini, okuyisipiliyoni sokujabulela ukulalela.
Isipikha se-Bluetooth esingenantambo sisebenzisa i-Bluetooth 5.0 ethuthuke kakhulu enganikeza ukuxhumana okuzinzile, ukusetshenziswa okuphansi, ukumataniswa okusheshayo nokuhambisana kwendawo yonke. Ngisho nasezimeni ezinzima, ngeke iphazamise isignali. I-5.0 Bluetooth ingaxhunywa kalula kuma-laptops, omakhalekhukhwini, i-MP3, i-iPhone, i-iPad namakhompyutha wakho, nama-TV namanye amadivayisi. Ungazitholela ukudlala i-bluetooth, ukudlala i-U-disk, ukudlala kwekhadi le-TF nokudlala kwe-AUX. Ungajabulela i-movie nomculo, futhi etholakalayo yezandla zamahhala zocingo nezomsakazo we-FM.
Kuyasebenziseka emisebenzini yangaphandle, okokusebenza kwamanzi kwenayiloni, izibani zamathoshi e-LED izindlela ezi-3 zihlangabezana nazo zonke izidingo zakho zangaphandle, nokusebenza kwebhange lamandla lapho kuvela ukushaja ifoni yakho noma enye idivayisi kagesi.
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P09
Lesi sipikha esisebenzisekayo se-bluetooth siyatholakala ukudlala i-bluetooth, ukudlala kwamakhadi we-TF, ukudlala kwe-USB nokudlala kwe-AUX. Ungajabulela umsindo ozungezile we-subwoofer 3D HIFI, ulalele izingoma, ubone i-movie. Ngisho nokubizwa kwesandla samahhala uzozizwa ubuso nobuso.
Inemibala ye-6 yemibala oyikhethayo, nokukhanya kwamamaki ama-3 ukuhlangabezana nobumnandi bakho. Njengokukhanya kwasebusuku, akukho ukukhanya, vikela amehlo. Futhi inomsebenzi wewashi le-alamu.
Ngaphezu kwakho konke, kuzoba into enhle yasekhaya, uzoba nokuphila okungcono ngayo.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Khulisa ukukhanya, Khulisa i-Lightin,